Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Meelaha ugu wanaagsan adduunka ee lagu iibsado guri fasax cusub
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Investments • Wararka Raaxada • News • Dadka • jiga • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Maaddaama ay tahay caasimadda gobolka woqooyiga Talyaaniga ee Veneto, Venice waxaa loo magacaabay goobta fasaxa koowaad ee adduunka.
Daraasad cusub ayaa lagu falanqeeyay meelaha caanka ah ee adduunka oo dhan arrimo ay ka mid yihiin waxyaabaha la qabanayo, la awoodi karo, heerka dembiyada iyo cimilada maxalliga ah.
Dhibcaha guud ee miisaanka leh ayaa markaa la abuuray oo waddan kasta ayaa la soo saaray.
10-ka meelood ee ugu sarreeya ee laga iibsado guri fasaxa adduunka oo dhan
Rank Goob Waxyaabaha la sameeyo 10,000 qofba Makhaayadaha 10,000 qofba Dhibcaha Tusmada Dambiyada Celceliska qiimaha nolosha ee bishii ee qoys ka kooban afar (USD) Celceliska qiimaha hantida halkii m2 (USD) Celceliska heerkulka (˚C) Celceliska roobabka bishii (mm) Dhibcaha guud /10
1 Venedik, Talyaaniga 358 2,628 31.63 $ 3,691 $ 4,930 13.1 64.2 6.92
2 Paphos, Qubrus 115 1,511 28.38 $ 2,560 $ 1,837 19.2 32.2 6.91
3 Abu Dhabi, UAE 5 231 12.04 $ 2,865 $ 2,836 27.6 10.8 6.70
4 Dubai, UAE 11 404 16.34 $ 3,191 $ 2,877 27.6 13.3 6.57
5 Funchal, Portugal 45 637 14.80 $ 2,335 $ 2,053 19.3 58.3 6.41
6 Corfu, Giriigga 74 1,322 19.45 $ 2,910 $ 1,647 17.2 85.0 6.28
7 Las Palmas de Gran Canaria, Spain 12 476 26.08 $ 2,409 $ 2,912 21.3 13.7 6.27
8 Santa Cruz de Tenerife, Spain 13 421 27.00 $ 2,545 $ 2,148 21.2 21.7 6.20
9 Larnaca, Qubrus 45 707 29.69 $ 2,834 $ 1,565 19.5 31.7 6.19
10 Marbella, Spain 56 1,749 38.59 $ 2,530 $ 3,684 17.3 48.6 6.16
Maaddaama ay tahay caasimadda gobolka woqooyiga Talyaaniga ee Veneto, Venice waxaa loo magacaabay goobta fasaxa koowaad ee adduunka. Waxaa loo yaqaanaa in laga dhiso haro ka badan 100 jasiiradood oo yaryar oo ku yaal xeebaha Adriatic, sababta ugu weyn ee ay u gashay kaalinta koowaad ayaa ah inta badan waxyaabaha la sameeyo iyo meelaha wax laga cuno lagana cabbo aaggeeda yar.
Haddii aad rabto guri fasax ah oo leh dalxiisayaal yar, halkaas oo aad si dhab ah ula qabsan karto dadka deegaanka, Paphos ee Qubrus waxay noqon kartaa doorasho wanaagsan. Magaaladu waxay ku jirtaa kaalinta labaad iyada oo ay ugu wacan tahay cimiladeeda Mediterranean-ka, iyada oo celcelis ahaan heerkulku yahay 19.2˚C, iyo sidoo kale in ay ka mid tahay meelaha la awoodi karo ee la falanqeeyay, iyada oo celceliska qiimaha guri mitirkiiba uu yahay $1,837.
Abu Dhabi ayaa kaalinta saddexaad ka galay qiimaynta, sidoo kale waxa la gaadhay dhibcaha dembiyada ugu hooseeya ee dhammaan meelaha la falanqeeyay, taas oo muhiim u ah kuwa u arka in ay ku dareemaan raaxo iyo ammaan gurigooda ka baxsan gurigooda mid aad muhiim u ah.
Antalya, Turkiga waa meesha ugu qiimaha hooseeya ee nolosha bishiiba $1,339 qoys ka kooban afar qof. Antalya sidoo kale waa halka loo socdo oo leh qiimaha ugu hooseeya ee hantida $730 mitirkiiba.
Cibaadada qorraxda, Las Vegas waa meesha ay ku socdaan roobabka ugu hooseeya ee 8.9mm oo dhacaya bil kasta. Halka Labka Maldives uu leeyahay celceliska heerkulka ugu sarreeya 28.5˚C.
Saraakiil u dhalatay Belarus ayaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta burcad badeednimo oo la horgeeyay maxkamadda federaalka ee Mareykanka January 21, 2022
Ugu yaraan 29 qof ayaa ku dhintay isbuurasho ka dhacday dalka Liberia January 20, 2022
Faafida hadda waa dhamaatay! FITUR ma kicisay dib-u-fikirka Dalxiiska Adduunka? January 20, 2022
Aruba waxay ku dhawaaqday shuruudaha gelitaanka cusub ee socdaalka Maraykanka iyo Kanada January 20, 2022
Awstaraaliya waxay ka dhigaysaa tallaalka COVID-19 mid qasab ku ah dhammaan muwaadiniinta January 20, 2022
3 Duulimaadyo Cusub oo ku socda Jamaica oo ka imanaya Belgium iyo Nederlaan bisha Abriil January 20, 2022
Xamaasad Cusub, Dhiirigelin iyo Ballanqaadka 20aad ee IMEX Frankfurt January 20, 2022